online shopping တွေကနေ cosmetics ဝယ်တော့မယ်ဆိုရင် | CosmeticMyanmar
Home » Article » online shopping တွေကနေ cosmetics ဝယ်တော့မယ်ဆိုရင်
online shopping တွေကနေ cosmetics ဝယ်တော့မယ်ဆိုရင်
Cosmetic ပစ္စည်းတစ်ခုကို ဝယ်ရတာ လွယ်လားလို့မေးရင် admin ရာ လာစားနေတာလား? ပိုက်ဆံလေးပေးဝယ်တာပဲ လွယ်တယ်ပဲပြောကြမှာပေါ့။ အရင်ကဆိုရင်တော့ လွယ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခုလို online shop တွေ ခေတ်စားလာပြီး online ကနေဝယ်ရတဲ့အချိန်မှာ ကိုယ်နဲ့အဆင်ပြေကိုက်ညီတဲ့ ပစ္စည်းတစ်ခုကိုရွေးချယ်ဖို့ဆိုတာ တကယ်မလွယ်တဲ့ case တစ်ခုပါ။ ဝယ်ထားပြီးမှ breakout ဖြစ်လို့ အဆင်မပြေလို့ဆိုပြီး ချောင်ထိုးလိုက်ရတာတွေကလည်း တစ်ပုံကြီးလေ။ အဲ့တော့ ဘာအကြောင်းအရာလေးကိုပြောပြပေးမှာလည်းဆိုတော့ ဘယ်လိုဝယ်ကြမလဲဆိုတာလေးကိုပါ။ အားလုံးကတော့ သိကြမယ်ထင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မသိသေးတဲ့သူလေးတွေ စမ်းတဝါးဝါးဖြစ်နေမှာစိုးလို့ တင်ဆက်ပေးလိုက်တယ်နော်။
၁. ဝယ်မယ့် ပစ္စည်းကို အရင် review တွေဖတ်ပါ။
ဒါကတော့ လူတိုင်း လူတိုင်းလုပ်ကြမယ်ဆိုတာသိပါတယ်။ ခုခေတ်က review ကောင်းရင်marketing တောင်မလိုပါဘူး တန်းဝယ်ကြတာပဲ။ Review မှာလည်း တကယ့်ကိုယုံကြည်ရပြီးတကယ်သုံးတဲ့ bloggers တွေကို ရွေးဖတ်ပါ။ တစ်ချို့တွေက တကယ်သုံးတာမဟုတ်ပဲ ဂျင်းတွေမိရင် တကယ်ခံရမှာကိုယ့်ရဲ့ skin ပါ။ အဲ့တော့ review တွေကိုသေချာလိုက်ဖတ်ပြီးတော့ ဝယ်ပါ။
၂. Sample, Travel Size, ခွဲရောင်းတာလေးတွေအရင်ဝယ်ပါ။
ဘာလို့ဒီလိုပြောရတာလည်းဆိုတော့ အသားရေဆိုတာတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်မတူပါဘူး။ သူတို့နဲ့တည့်တိုင်းကိုယ်နဲ့အဆင်ပြေချင်မှပြေမှာပါ။ အဲ့တော့ အရင် mini size လေးတွေ ခွဲရောင်းတာလေးတွေအရင်ဝယ်ပါ။ စစဝယ်ချင်းမှာ ဘူးကြီးတွေ ဝယ်လိုက်ပြီးအဆင်မပြေရင် ပိုက်ဆံလည်း နှမြောစရာကောင်းပြီးတော့ အပိုကုန်တာပေါ့။ အခုဆို ခွဲရောင်းတဲ့ ဆိုင်လေးတွေ, mini လေးတွေရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေလည်းပေါ်လာပြီဆိုတော့ အဆင်ပြေတယ်လေ။
ဒါကတော့ အရေးအကြီးဆုံးလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ ခုခေတ်က အပြင်ဆိုင်မှာဝယ်တဲ့သူက ခပ်ရှားရှားရယ်ပါ။ Online Shop တွေမှာ ပဲဝယ်နေကြတောဆိုတော့ ပစ္စည်းအစစ်အမှန်ရောင်းပြီး စိတ်ချရတဲ့ ဆိုင်ကိုရှာဝယ်ပါ။ ဆိုင်ရှာဖို့ကလည်း မခက်ပါဘူးနော်။ ကောင်းတာလေးတွေဆို ပြန်မျှဝေကြတာဆိုတော့ သိလွယ်ပါတယ်။
၄. ပစ္စည်းတွေကို တစ်ခုပြီးတစ်ခုထပ်မဝယ်ပါနဲ့။
မိန်းကလေးဆိုတာအလှအပနဲ့ပတ်သက်ရင် လောဘကြီးကျတာ သဘာဝပါ။ တစ်ခုမကုန်သေးဘူး တစ်ခုထပ်ဝယ်ကြတာလေ။ ပိုက်ဆံတွေအပိုကုန်ပြီးတော့ ရလာဒ်မသိသာရင် လက်လျှော့လိုက်ကြတာကလည်း ပြဿနာတစ်ခုပါ။ အဲ့တော့အပိုတွေလည်း မကုန်အောင် စိတ်ရှည်ရှည်လေးသုံးပေးပါ။
အိမ်ရှေ့ထိလာပို့ပြီးတော့ စိတ်တိုင်းကျဝယ်လို့ရတဲ့ online shop တွေကို ဒီလောက်ဆိုသိသင့်သလာက်သိကြမယ်ထင်ပါတယ်။ အဆင်ပြေမယ်လို့လည်း မျှော်လင့်ပါတယ်နော်။
Panda eye လေးတွေကို ယူပစ်သလို ဖျောက်ပေးမယ့် JAYJUN Eye Gel Patch
2018 အတွင်း လူကြိုက်အများဆုံး အလှအပ ခွဲစိတ်ပြုပြင်မှုများ
Tags: cosmeticOnline shop